Vashandi veWiricheya Vanofanira Kutanga Blog | Karman® Mawiricheya
Vashandi veWiricheya Vanofanira Kutanga Blog
Unofanira Kutanga a hwiricheya Blog?
Kutanga blog chiitiko chikuru kune wese munhu kwete vanhu vakaremara chete. Inogona kukudzidzisa zvakawanda itsva zvinhu kana kungo gadzira hunyanzvi hwako. Sezvo iyo Internet izere nemabloggi iwe uchafanirwa kumira kubva pavanhu. Kubhuroka inzira yekuratidza mazwi ako paInternet kune vangangoita zviuru zvevanhu pasirese. Zvese zvaungonyatsoda ingori laptop uye imwe nguva yemahara uye unogona kutanga kublogi nhasi mahara. Iko kusimuka kweInternet kwakabvumidza kune mazhinji mawebhusaiti kuti azvishambadzire ivo mahara. Izvo zvinokupa iwe kupfura kuti utange nhasi mahara uye kana iwe usingazvifarire saka hauna kurasikirwa nemari chero ipi inopinda. Iyi hobby ichave yako kana iwe ukazviwana iwe uchiverenga nekuti kunyora kunogona kuenda kunoenderana nekuverenga. Kutanga kutumira zvinyorwa zvidiki pasocial media yako uye uone zvinofungwa neshamwari yako kuti uwane maonero anovaka kubva kune vezera rako. Mhuri inogona zvakare kuve yakanaka sosi yemafungiro sezvo ivo vachiziva iwe watove senge kumashure kweruoko rwavo.
Iwe Unotanga Sei?
Kutanga haisi chikamu chakaomarara asi uchichengeta kuomerera kwakafanana ndicho chikamu chakaoma. Ndosaka iri zano rakanaka uye wobva waona kana paine munhu anofarira ako eblog blog nekuti kana akasadaro unobva waora moyo uye kwete kuramba uchizviita. Pane web-kubata masosi kwaunogona kuyedza yako yekutanga kuyedza yekubhuroga uye ona kana iwe uchizopedzisira waifarira. Dingindira rakanaka rinogona kuve kubatanidzwa kwewiricheya mukati upenyu hwako uye unogona zvakare kuve mukana wakanaka wekubatana nemamwe mabloggi ewiricheya sezvo reshiyo yekubhuroga yewiricheya haina kunyanya kunyanyonaka parizvino. Svika kune vanoblogi uye uvabvunze mazano uye misoro yavanokukurudzira kuti unyore nezvayo. Enda ikoko kutsoropodza kukubatsira kuti uve nani uye nekukurudzira kuti uite zvirinani. Tanga a Blog neshamwari kana izvozvo zvichizobatsira kuvimba kwako semunyori.
Vamwe vanogona kuzviwana zvakaoma kuramba vachiisa zvinyorwa online asi mushure mekunge wawana kurudziro yako unozobudirira. Edza kuve nezvakarongwa zvinyoreso saka haufanire kunge uri pakombuta zuva rega rega kupesana nekuve pakombuta zuva rese kwezuva rimwe chete. Chaizvoizvo yega yega webhusaiti saiti inokupa iyo kugona kuita izvi uye zvine simba kwazvo. Zvakafanana nerobhoti rinotumira iwe kushandisa rako basa. Zvakare, kana iwe uchinyora kunyora zuva rega rega saka unogona kuve neyakagadzika svondo rega rega kuti basa riitwe. Semuenzaniso, paMuvhuro zvinogona zvese nezve mawiricheya mazano uye neChipiri zvinogona kuva zvese nezve nzvimbo dzekushanyira. Nenzira iyi unogona kuzvipa zvinonakidza paunonyora yega post iwe unotanga kutarisira kune rinotevera zuva. Shandisa colander kuchengetedza zvawatumira zvakarongeka uye zvakagadzirira kuenda.
Wiricheya Vashandisi uye VhidhiyoGames?
Mamuseum uye Wiricheya